Hay’adda MSF oo walaac ka muujisay Dadka laga celinayo Xeryaha Dhadhaab – Radio Muqdisho
Hay’adda MSF oo walaac ka muujisay Dadka laga celinayo Xeryaha Dhadhaab
Hay’adda Dhakhaatiirta aan Xuduudda Lahayn ee MSF, ayaa ugu baaqday mar kale Dowladda Kenya iyo hay’adda Qaramada Midoobay u qaabbilsan qaxootiga UNCHR, in ay keenaan qorshe kale oo kan dhaama oo ay Dalalka deeqaha bixiyaana taageeraan.
Warbixinta MSF , oo Cinwaan looga dhigay ‘Geeddiga Dhadhaab illaa Soomaaliya,waa Dad dab lagu tuurayo, ayaa lagu sheegay in xog ururin la sameeyay lagu ogaaday in Tobankii Qof ee qaxooti ahba Siddeed ka mid ah ay walaac ka muujiyeen dib u celinta, taasoo ay ka mid tahay cabsi ay ka qabaan in kooxaha hubaysan ee Soomaaliya ka jiraa khasab ku qortaan, faro-xumayn haweenka loo geysto iyo daryeel caafimaad la’aan.
Warbixinta ay soo saartay Hay’adda Caalamiga ah ee MSF, ayaa waxa kale oo lagu sheegay cawaaqib xumada ka dhalan karta in mar qudha dad badan dib loo celyo.
Agaasimaha guud ee hay’adda MSF, Bruno Jochum, ayaa sheegay inay tahay mid iska cad in xeryo qaxooti aanay ahayn waxa ugu habboon ee lagu xallin karo xiisad taagnayd 25 Sano, balse wuxuu walaac ka muujiay in xeryahaasi mar keliya oodda la saaro iyadoon la haynin xal kale,wuxuuna ku micneeyay in Dadkii dib loogu tuurayo Debka colaadeed ee holcaya.
Wuxuuna sarkaalkan caqabadda ugu weyn ku tilmaamay daryeel caafimaad la’aan ka taagan inta badan goobaha la doonayo in lagu celiyo iyo tasiilaadka xagga nolosha oo aan haatn jirin, kuwaasoo qatartooda leh.
Waa markii Labaad ee ay hay’adda aan xudduudda lahayn ee MSF ka digto dib u celinta Qaxootiga Soomaaliyeed ee muddada rubuc Qarniga ah ku jiray Xeryaha Dhadhaab Kenya iyadoo ku celcelisay in la saxo marka hore baahiyaha asaasiga ee Dadkaasi iyo halka la dejinaya intuba.
Danjiraha Soomaaliya ee Mareykanka oo booqday Minneapolis+Sawirro
Baroordiiqda geerida boqor Bhumibol Adulyadej oo ka socota dalka Thailand+Sawirro